Hotel Projects International - Armati Hotel Project Africa
Armati Hotel Project Africa
NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 9: 16: 27 AM America / Los_Angeles
Omnye Armati 5 uqalise iprojekthi Ihotele eMzantsi Afrika, eAfrika, bamkelekile ukuba atyelele kule hotele ukubona kwetephu yethu.
indawo kule hotele ngayo Rhawutini eSandton, kwisithili eziphakamisa yeshishini sixeko, nje uhambo olufutshane evela yeGautrain Station nemizuzu kude ezinika umdla ezifana Nelson Mandela Square. Iindwendwe ukonwabela ufikelelo lula OR Tambo International Airport, leyo neekhilomitha 30 kuphela ehotele. Khetha kumagumbi 290 kunye eziluncedo ezifana Free kwizinga eliphezulu-isantya, Internet engenazingcingo ukuze iindwendwe abahlala ehotele, okanye yokuzibandakanya indlwana e ezinamagama ngenxa leengalo landiswa. Iindwendwe wayehlala Business Class Amagumbi, Suites kunye penthouses ukonwabela ufikelelo kwi-Business Class Lounge. Ukubukela chefs ukulungiselela okuthandwayo Italian yanamhlanje ekhitshini ezivulelekileyo Vivace. Kumgangatho ilanga ipuli phezu 8th phantsi, yokuzivavanya kolwandle kunye kakuhle izixhobo Planet Fitness Platinum Gym wathembisa amathuba elaneleyo ukuba siphumle. iinkonzo kule hotele ngayo Rhawutini nazo zibandakanya yokupaka iimoto ekhuselekileyo. Indawo wemikhosi unako ukuyigcina kwiholo 90-Seater okanye kwelinye lamagumbi intlanganiso 15 oxhobele kakuhle ishishini kunye neendibano zoluntu.
Afrika projekthi Ihotele lokuhlambela